Amanoveli wamanje ahamba phambili
Ukubuyekezwa kwamanoveli amanje
UMlimi Wengadi, Umqophi kanye Nombaleki, nguCésar Aira
Wonke umbhali ozihloniphayo kufanele abheke lo msebenzi ophazamisayo, hhayi kuphela emsebenzini wakhe, kodwa ekujwayelekile kwezincwadi. Futhi uCésar Aira ubengeke abe ngaphansi ngoba i-avant-garde isezingeni. Futhi akukubi neze...
Incwadi yazo zonke izithandwa, ka-Agustín Fernández Mallo
Izincwadi zinethuba lokusisindisa. Akusewona umbuzo wokucabanga ngemitapo yolwazi lapho izingane zezingane zethu zingabheka khona umcabango, isayensi nolwazi olufakwe ezincwadini njengelungelo lobunikazi lokuziphendukela kwemvelo okungenakugwenywa. Siyazi ukuthi akukho okuzosala ngokushesha. Yingakho i...
Umdanso nomlilo, nguDaniel Saldaña
Ukuhlangana kungaba muncu njengamathuba esibili othandweni. Abangane bakudala balwela ukubuyisela isikhala esingasekho sokwenza izinto okungasenabo. Hhayi nganoma yini ngokukhethekile, ngoba ekujuleni kwabo abaneliseki, kodwa bamane bafune ...
Indaba ehlekisayo, kaLuis Landero
Indaba yayo yonke indaba yothando enosonhlamvukazi, noma eyamanje noma ekude, ingase ingahlukani kakhulu esicini sayo sothando. Ngoba inoveli yothando ye-transcendent, njengoba ngingasho lutho ngohlobo olupinki, isitshela ngemizwa engenakwenzeka ukuba ifinyelele umvuthwandaba ngenxa yesimo senhlalo, ngoba ...
Ungasusi umqhele wakho kuwe, nguYannick Haenel
Sibabaza umzuzu omangalisayo lapho indoda isukuma emlotheni wayo ukuze iziveze ekubalekeni komcabango wayo ochichimayo. Ukukholelwa kulokho kuhlangana nenjongo yokuphila kunesizathu se-epic. Ngisho nangokwengeziwe lapho imithwalo yokuhlulwa inqwabelana eyodwa efana ...
NgoLwesibili wesikhombisa, ngu-El Chojin
Yonke indaba idinga izingxenye ezimbili uma kutholakala uhlobo lokuhlanganiswa, okuyikho okuphathelene nanoma yiluphi uhlaka olungena emkhakheni wokulingisa ngokomzwelo. Akuwona umbuzo wokugqamisa lolu hlobo lwezindaba ezimbili phambi komuntu wokuqala. Ngoba futhi ...
Izizinda zempisi, zikaJavier Marías
Kuhlala kuyisikhathi esihle sokubuyisa ukuqala komunye wababhali bamanje baseSpain, uJavier Marías. Ngoba nansi indlela umbalisi osafufusa atholakala ngayo yonke iyunivesithi yezobuciko engaphambili. Ukuphinda ufunde okuyilungelo okusitshela ngezwi lomlandisi uqobo. Futhi ngoba ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi22 Okulandelayo →